China TPU mafana miempo film adhesive ho an'ny mpanamboatra akanjo ivelany sy mpamatsy | H&H
Hatevina / mm 0.05 / 0.06 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35
Sakany / m / 1m / 1.4m / 1.5m toy ny namboarina
Faritra mitsonika 85-125 ℃
Asa tanana asa milina fanindriana hafanana: 150-160 ℃ 10s 0.4Mpa
HD371B dia namboarina tamin'ny fitaovana TPU tamin'ny alàlan'ny fanovana sy fomular sasany. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fehikibo telo sosona tsy tantera-drano, atin'akanjo tsy misy fangarony, paosy tsy misy fangarony, zipper tsy misy rano, fantsom-drano tsy misy fangarony, fitaovana tsy misy fangarony, fitafiana maro karazana, fitaovana hita taratra sy saha hafa. Ny fanodinana fitambarana lamba elastika isan-karazany toy ny lamba nylon sy lamba lycra, ary ny sehatry ny fatorana ny PVC, ny hoditra ary ny fitaovana hafa.
1. Fihetseham-po malefaka: rehefa apetraka amin'ny lamination lamba, ny vokatra dia hanana akanjo malefaka sy ahazoana aina.
2. mahatohitra fanasan-kanina: mahazaka manasa rano farafahakeliny 10 farafaharatsiny.
5. Teboka mahery vaika: mahafeno ny fangatahana fanoherana ny hafanana.
Ny sarimihetsika adiresy mihetsiketsika TPU mafana dia be mpampiasa amin'ny akanjo ivelany toy ny placket, cuff laMination ary famehezana zipper izay ankafizin'ny mpanjifa satria ny fahatsapany akanjo malefaka sy ahazoana aina na fankasitrahana kanto. Izy io koa dia fironana amin'ny ho avy fa ny fampiasana sarimihetsika adhesive melt mafana ho an'ny famehezana seam fa tsy ny zaitra mahazatra.
HD371B TPU Sarimihetsika adhesive miempo mafana dia be mpampiasa amin'ny badge sy peta-kofehy vita amin'ny peta-kofehy izay ankafizin'ny mpanararaotra akanjo noho ny kalitaon'ny tontolo iainana sy ny fanamorana fanodinana azy. Ity dia fampiharana be mpampiasa eo amin'ny tsena.
Teo aloha: Sarimihetsika mihetsiketsika mafana amin'ny akanjo ivelany
Manaraka: Kitapo fametahana mafana amin'ny atin'akanjo anatiny